Reward System ၏ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (၂၀၁၀) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညမ်းမှုရှိသည်
ယင်းဆုကြေးစနစ် (2010) ၏ဆယ်ကျော်သက်ကလေးဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
တပ်ဦး Hum neuroscience ။ 2010; 4:6။
2010 ဖေဖော်ဝါရီလ 12 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ 2009 စက်တင်ဘာလ3အွန်လိုင်း Prepublished ။ Doi: 10.3389 / neuro.09.006.2010
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလဖြစ်ပါတယ်။ ငါnvestigators အဆိုပါ striatum အတွက်ဆယ်ကျော်သက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစသောအပြောင်းအလဲဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေတဲ့ဒေသအကြောင်းကိုနှစ်ခုဆန့်ကျင်ယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ဆုလာဘ် Paradigm နှင့် တွဲဖက်. အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကိုအသုံးပြုကြသည်။ တဦးတည်းအယူအဆဟာ striatum ကြီးထွားဆုလာဘ်-ရှာအပြုအမူလူကြီးများကဲ့သို့တူညီသော activation အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သောကြောင်းထိုကဲ့သို့, အတော်လေး hypo-တုံ့ပြန်မှုဆုလာဘ်မှမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းကြောင်း posits ။ နောက်ထပ်ရှုထောနောက်ပိုင်းတွင် သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ်-ရှာမှုအရာ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း striatal ဆုလာဘ်စနစ်က Hyper-တုံ့ပြန်မှုကြောင်းအကြံပြု. နှစ်ဦးစလုံးယူဆချက်အဘို့သက်သေအထောက်အထားသတင်းပို့ထားပြီးနေစဉ်, လယ်ပြင်ယေဘုယျအားဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အခြေခံပြီးဒီအဆုံးစွန်သောအယူအဆအပေါ်ဆုံဖြစ်ပါတယ်. ဤသုံးသပ်ချက်ကိုခုနှစ်, ငါကဒီအယူအဆကိုထောကျပံ့ဟာလူထုကို fMRI တွေ့ရှိချက်အပေါ်သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်နှင့်ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်မေးခွန်းစုံစမ်းရေးအနာဂတ်ဒေသများနှင့်အတူကောက်ချက်ချရန်အသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြရန်။
keywords: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု, striatum, ဆုလာဘ်
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မှာသို့ရာတွင်နှင့်ပင်ကိုယ်မူလလေ့လာရေးဒီဖြစ်စဉ်များ၏အာရုံကြောအလွှာကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိမြင်မှုမှ neuroscience ၏လယ်ပြင်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ကျယ်ပြန့်တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့အလုပ်ကိုဦးနှောက် (ဥပမာ Schultz အတွက်ဆုလာဘ် sensitivity ကို၏ထိုင်ခုံအဖြစ် dopamine ကြွယ်ဝ striatum ဖော်ထုတ်ထားပါတယ်အဖြစ်, 1998; ဂူ et al ။ , 2004), ဒီဒေသဟာဆယ်ကျော်သက်ဆုလာဘ်စာပေများတွင်ပြင်းထန်သောလေ့လာမှုများ၏အာရုံစူးစိုက်ခဲ့နှင့်ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏အာရုံဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ချမ်းသာကြွယ် dopamine innervation ခံယူခြင်းနှင့်ဆုလာဘ် sensitivity ကို်ပတ်သက်နေနေကြသည်ကဒီမှာဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်မဟုတ်ကြောင်းကိုအခြားသောဒေသများ (ဥပမာ, အ orbitofrontal cortex) အပေါ်တွေ့ရှိချက်များ။ ယနေ့အထိလေ့လာမှုများ striatum သားများမှလူကြီးများမှ, ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးဆုချမှအများဆုံးတုံ့ပြန်မှုဟာအာရုံကြောဒေသကြောင်းသဘောတူနေစဉ်, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဒီအာရုံကြောစနစ်၏ဆွေမျိုးထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆွေးနွေးငြင်းခုံတစ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုခုနှစ်, ငါခေတ္တဆုလာဘ်-related striatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ ပတ်သက်. တိရိစ္ဆာန်စာပေထဲကနေထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေဖြင့်စတင်။ တစ်ဦးကနောက်ဆက်တွဲအပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neuroimaging တွေ့ရှိချက်သုံးသပ်ပြီးနှင့်လေ့လာမှုများဖြတ်ပြီးကှာဟဘို့အယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ရှင်းလင်းချက်များနှင့်ထင်မြင်ချက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါအတွက်အသိပေးချက်နှင့်သုတေသန၏ဤဖြစ်မည်ဧရိယာ၏အနာဂတ်လမ်းညွန်နှင့်အတူကောက်ချက်ချ။
အံ့သြဖွယ်အမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအခိုင်အမာတစ်ခုလြော့ပေါ့ခနျမှနျးခကျြ (Dahl ဖြစ်ပါသည် 2004; Steinberg, 2005; Somerville et al ။ , 2009) ။ လယ်ပြင်၌ယေဘုယျအားဖြင့်ယူဆနှင့်ဤအပြုအမူအပြောင်းအလဲများအကြီးအကျယ်ငွေကြေး, ဝတ္ထုနှင့်လူမှုရေးဆုလာဘ်အပါအဝင်ဆုလာဘ်ကမောင်းနှင်နေကြသည်သောအယူအဆအပျေါမှာသဘောတူညီခဲ့နှင့် extension ကို, အကျိုးကို-အထိခိုက်မခံ dopamine စနစ်ဖြင့်ခဲ့သည်။ လျော့နည်းနားလည်သဘောပေါက် ဘယ်လို မြီးကောင်ပေါက်ကိုမကြာခဏပြအကျိုးကို-မောင်းနှင်အပြုအမူတွေကိုအားပေးဖို့ဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြတ်ပြီးအကျိုးကိုစနစ်ကအပြောင်းအလဲများကို။
နှစ်ခုဆန့်ကျင်ဖြစ်နိုင်ခြေန်းကျင်ဗဟိုကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ဆုလာဘ်အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. နှစ်ဦးကိုမူလတန်းသီအိုရီရှိပါတယ်: striatal စနစ်က hypo- သို့မဟုတ် Hyper-တုံ့ပြန်မှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်မှဖြစ်သနည်း တချို့ကသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆုလာဘ်-ရှာခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေစိတ်ခွန်အားနိုး circuitry (Blum et al များ၏လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးဆွေမျိုးလိုငွေပြမှုကနေဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, အဆိုပြုကြ။ , 1996, 2000; Bjork et al ။ , 2004) ထိုသို့သောပိုမိုပြင်းထန်သောသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမကြာခဏဆုလာဘ်လှုံ့ဆော်မှုလူကြီးများကဲ့သို့တူညီသော activation အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ ဒီအမြင်ဖွယ်ရှိအပျော်အပါး (Larson နှင့် Asmussen ခံစားရဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖြစ်သောဆယ်ကျော်သက် anhedonia တစ်သီအိုရီတစ်ခု extension တခုဖြစ်တယ်, 1991). ဒီသီအိုရီအများအတွက်ပံ့ပိုးမှုပျော်မွေ့၏အမြင်များတွင်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အခြားအသက်အရွယ်အကြားကွဲပြားခြားနားမှုဖေါ်ပြခြင်းဒေတာကနေလာပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, လူ့မြီးကောင်ပေါက်အနုတ်လက္ခဏာတစ်ခုတိုးပြအဟောင်းနှင့်အငယ်လူကြီးများ (Rutter et al မှထိခိုက်စေခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်စိတ်ဓါတ်များဆွေမျိုး။ , 1976; Larson နှင့် Asmussen, 1991) နှင့်လည်း (Watson နှင့် Clark က Self-အစီရင်ခံစာများအပေါ်အခြေခံပြီးအဖြစ်) (အရွယ်ရောက်သူထက်လျော့နည်းပျြောမှေ့စကဲ့သို့တူညီသောအပြုသဘောအခြေအနေများတွေ့ကြုံခံစားဖို့ပေါ်လာ, 1984) ။ မြီးကောင်ပေါက်ကလေးတွေ (DeGraff နှင့် Zandstra ထက်လျော့နည်းသာယာသောချို (သကြား) ကိုလည်းတွေ့ပါ 1999) ။ ဤအအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီး, အချို့ကိုမြီးကောင်ပေါက်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကို dopamine-related circuitry (လှံအတွက်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ကြောင်းဆုလာဘ်-ရှာထဲမှာတိုးမှတဆင့်အသစ်အစာစားချင်စိတ်ကိုစစ်ကူ purse မှမောင်းသောအကြိုးလှုံ့ဆော်မှုအနေဖြင့်ဒီထက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုမှီစေခြင်းငှါမှနျး 2000). တစ်ခုကဆန့်ကျင်သီအိုရီ ventral striatal dopamine ဆားကစ်၏အချိုးအစားမမျှတိုးပွားလာ activation (အကြောင်း, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းကြိုးဖြစ်ရပ်များမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်တိုးမြှင့် dopaminergic လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်) ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဆုလာဘ်-related အပြုအမူအခြေခံကြောင်း postulates (ကုန်သည်များ et al ။ , 2003) ။ ဒီအမြင် dopamine အပေါ်ကျယ်ပြန့်အလုပ်နှင့်အရေးယူသို့ကုဒ်သွင်းစိတ်ခွန်အားနိုး drives တွေကို၏ဘာသာပြန်ချက်အတွက်၎င်း၏ကျောင်းအုပ်ကြီးအခန်းကဏ္ဍ (Panksepp မှပေါ်ပေါက် 1998) ။ ဒါကသီအိုရီအဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူဆုလာဘ်-related အစာစားချင်စိတ်စနစ်များအားဖြင့်မောင်းနှင်ကြောင်း posits ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြန်လည်သုံးသပ်အလုပ်တစ်ခုအများစုအပေါ်အခြေခံပြီး, လယ်ပြင်ယေဘုယျအားဖြင့်ဒီအဆုံးစွန်သောသီအိုရီအပေါ်ဆုံပြီ ကြောင်းမြီးကောင်ပေါက်ဖြစ်သောကြောင့်ဆုချမှ hypersensitivity အပ်နှင်းသော striatum အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်မြင့်မားတဲ့ဆုလာဘ်အပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လှုံ့ဆော်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည် (ဥပမာ, Ernst et al ။ , 2009) ။ သို့သော် hypo-တုန့်ပြန်အယူအဆ၏ထောက်ခံမှုအတွက်ဒေတာအဖြစ်ကောင်းစွာပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်။
Striatal Dopamine ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
လူသားတွေအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေသာဆနျးစစျနိုငျသညျ Vivo အတွက် တစ်စနစ်များမှာ striatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ neuroimaging နည်းလမ်းများ အသုံးပြု. မြင့်။ ဒါဟာအတိုင်းအတာများကန့်သတ်သည့် dopamine စနစ်အာရုံကြောအဆင့်မှာကြီးထွားပြောင်းလဲမည်သို့အတိအကျဖော်ထုတ်မရှိချေ။ အစား, အကြိုးကိုမှ striatal တုံ့ပြန်မှုအကြား link ကိုယူဆ dopamine လှုပ်ရှားမှုသာတစ်ဦးအညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားယူဆချက်, striatal circuitry နှင့် dopamine သည့်စနစ် (ဥပမာ Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည်စပါးကျန်ကိုကောက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုအပေါ်အခြေခံထားတယ် 1998) ။ ကဲ့သို့သော, သူတို့ကဒီမှာခေတ္တပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်။
ရရှိနိုင်သက်သေအထောက်အထားသိသိသာသာပြောင်းလဲမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း, ဖွံ့ဖြိုးရေးတလွှားနှင့်အထူးသဖြင့်အတွင်း dopamine စနစ်ရှိပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ Dopamine အဆင့်ဆင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း striatum တိုးပွါး (Teicher et al ။ , 1993; Andersen က et al ။ , 1997) ။ သို့သော်အခြားအစီရင်ခံစာများငယ်ရွယ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်လည်းအဟောင်းဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များမှနျူကလိယ accumbens (NACC) ဆွေမျိုးများနှင့်လူကြီးများမှဆွေမျိုးအောက်ပိုင်း NACC dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်နှုန်းထားများအတွက် dopamine ပေါင်းစပ်၏အနိမ့်ခန့်မှန်းချက်ကိုပြသကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ Stamford (1989) အလုပ်ကြွက်, dopamine လွှတ်ပေးရန်တစ်လျှော့ချ Basal နှုန်းဒါပေမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူမှဆွေမျိုး periadolescent အတွက်ပိုကြီးတဲ့ dopamine သိုလှောင်မှုရေကူးကန်, သတင်းပို့ခြင်းဖြင့်ထိုအကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုမှတစ်ဦးသိသာ resolution ကိုပြသ (Stamford, 1989) ။ ငါBasal အခြေအနေများအတွက်လျှော့ dopamine လွှတ်ပေးရန်ရှိနေသော်လည်းဎတကယ်တော့သည်ဆယ်ကျော်သက်အတွက် dopaminergic အာရုံခံ, (Stamford, 1989; Andersen ကနှင့် Gazzara, 1993), တကယ်တော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် / သို့မဟုတ် pharmacological စိန်ခေါ်မှုများအားဖြင့်နှိုးဆွပေးလျှင် ပို. dopamine လွှတ်နိုင်ကြသည် (Laviola et al ။ , 2001) ။ Bolanos et al ။ (1998) ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များကနေ striatal ချပ်တူညီတဲ့အုပ်စုတစ်စုကဖော်ပြခဲ့သည်မူကြောင်းကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းထိုအ dopamine agonists ဖို့လျော့နည်းသွားအပြုအမူ Response မတူဘဲ၌တည်သော, လူကြီးများထက် dopamine လွှာမှ inhibitors ကိုကင်းနှင့်အ nomifensine ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံခဲ့ကြကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အတူတူ, ဤအ data ကိုလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းကြိုးဖြစ်ရပ်များပိုကြီး dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ဖြစ်ပေါ်စေမည်, ထိုအကြံပြု (Laviola et al ။ , 2003). ဒီတော့လျှင်အမှန်ပင်ကြောင့်ထို့နောက်ဖြစ်ကောင်းမြီးကောင်ပေါက်စပိုင်းတွင် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်မည်ကိုပိုပြီးဆွ (ဆုလာဘ်) ထွက်ရှာဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များ dopamine လွှတ်ပေးရန်၏အောက်ပိုင်း Basal နှုန်းထားများရှိသည်သောအမှုဖြစ်၏ နှိုးဆွတစ်ကြိမ်, သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်နောက်ပိုင်းတွင်နောက်ထပ်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူလှုံ့ဆျောတဲ့အားဖြည့်တုံ့ပြန်ချက်သံသရာကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင့် သာ. ကြီးမြတ် dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုပြသပါလိမ့်မယ်.
dopamine receptors အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲ
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတံစဉ်များကိုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် dopamine အဲဒီ receptor overproduction ရှိကွောငျးအများအပြားအစီရင်ခံစာများမှတ်ချက်ချကြပါပြီ (Teicher et al ။ , 1995). : D ၏ binding Striatal နှင့် NACC dopamine အဲဒီ receptor1 နဲ့ D2 မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် receptors ထိပ် (P40) 30-45% အကြောင်းကိုလူကြီးတွင်တွေ့မြင်သူတွေကိုထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြောင်းအဆင့်ဆင့် (Teicher et al ။ , 1995; Tarazi et al ။ , 1998, 1999) ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင် autoradiography အသုံးပြုခြင်း, Andersen က et al ။ (1997) ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးထက် သာ. ကြီးမြတ်သော overproduction (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 4.6-ခွံ) နှင့် striatal: D ၏ဖျက်သိမ်းရေးခဲ့ထိုကဲ့သို့သော, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism ပြသ1 နဲ့ D2 ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးထက် striatal receptors။ စိတ်ဝင်စားစရာအဲဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (gonadal ဟော်မုန်းအပွောငျးအလဲအားဖြင့် Andersen က et al ကမကထပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်။ , 2002) ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များ (Andersen ကနှင့် Teicher ရှိသည်ဖို့ပေါ်လာပါဘူး, 1999) ထိုအမူအကျင့်တွေနဲ့ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ အလားတူပုံစံ, ဆိုသော်ငြားတစ်ဦးထက်ပိုအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖျက်သိမ်းရေးကာလ (Andersen ကနှင့် Teicher အတူ prefrontal cortex အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာဖြစ်ပါတယ် 2000) ။ Confocal microscopy အဆိုပါ prefrontal cortex အတွက် retrogradely ခြေရာကောက် cortical output ကိုအာရုံခံ D ကိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ကိုဖော်ပြကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်1 အဟောင်းသို့မဟုတ်အငယ်ကြွက် (Brenhouse et al ထက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း receptors ။ , 2008). ဤရွေ့ကားကြွက်တွေ့ရှိချက်လူ့ postmortem အလုပ်နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်။ Seeman et al ။ (1987) အဆိုပါ dopamine D ကိုတစ်ဦး-တစ်ဝက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမှသုံးပုံတစ်ပုံနှင့်အတူလူငယ်-to-အရွယ်ရောက်ပြီးသူကာလအတွင်းလူ့ striatum အတွက် dopamine အဲဒီ receptor လူဦးရေအတွက်သိသာသောအပြောင်းအလဲသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်1-like နဲ့ D2လူကြီးတို့ကရှုံးနိမ့်ခံရ Juvenile ၏ striatum အတွက်ပစ္စုပ္ပန် receptors -like. : D အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကျဆင်းမှု1 လူသားများတွင်လူကြီးမှနို့စို့အရွယ်ကနေ receptors လည်းအခြားသူများအစီရင်ခံထားပြီ (Palacios et al ။ , 1988; ဂူ et al ။ , 1999) ။ အတူတူအဲဒီတိရိစ္ဆာန်နှင့် postmortem တွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် dopamine စနစ်အား သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုဤအသက်အရွယ်အုပ်စုတွင်တစ်ဦးချင်းစီ predispose စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲအပိုင်းမှာတော့ငါစနစ်များအဆင့်မှာပြောင်းလဲမှုအလားတူဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပုံစံများကိုပြသသည်ဤတွေ့ရှိချက်များပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားပြီး neuroimaging ဒေတာကိုဖော်ပြရန်။
Neuroimaging ထံမှ Insights
သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (MRI) နည်းလမ်းတွေလူသားတွေအတွက်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဖမ်းယူများအတွက် noninvasive ကိရိယာသစ်တစ်ခု set ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဒါကြောင့်ဓါတ်ရောင်ခြည် (ကနေဒီ et al ionizing ၏အသုံးပြုမှုကိုမပါဘဲတိကျသော, high-resolution ခန္ဓာဗေဒပုံရိပ်တွေကိုပေးစွမ်းသည်အဖြစ် MRI ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လေ့လာမှုမှာအထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။ , 2003). ပေမယ့်စုစုပေါင်းဦးနှောက်အရွယ်အစားအသက်အရွယ် 90 (Casey et al ဖြင့်၎င်း၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူအရွယ်အစားခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 6% ဖြစ်ပါတယ်။ , 2005), မီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူကိစ္စ subcomponents မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်လျှောက်လုံးအပြောင်းအလဲများကိုခံယူဆက်လက် (Giedd et al ။ , 1999; Sowell et al ။ , 2003; Gogtay et al ။ , 2004) ။ အထူး 12 နှစ်ပေါင်းအားဖြင့် cortical မီးခိုးရောင်အမှု၌သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းလည်းမရှိ (Giedd et al ။ , 1999) နှင့်တစ်ဦးကလေးဘဝတစ်လျှောက်လုံးဦးနှောက်အဖြူအမှု၌တိုးနှင့်လူငယ်လူကြီးကြိမ်မြောက် (Caviness et al ။ , 1996) ။ မကြာသေးမှီက data တွေကိုအဖြူကိစ္စ (Sowell et al ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဒေသဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနှင့်အတူ, မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်တစ်ဦး inverted ဦး-ပုံသဏ္ဍာန်ပုံစံရှိတယ်ဆိုတာအကြံပြုအပ်ပါသည်။ , 1999, 2003; Gogtay et al ။ , 2004) ။ အဆိုပါ dopamine စနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားများဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ dopamine ကြွယ်ဝတိုကျရိုကျနှင့် striatal ဒေသများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကတဆင့်သိသာရင့်ကျက်သောအပြောင်းအလဲခံယူကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း (Giedd et al ။ , 1996; Sowell et al ။ , 1999), အ Basal ganglia (Giedd et al ၏ဒေသများအတွက်ထုထည်ကြီးမားသောကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူ။ , 1996, 1999) ။ ကြွက်တွေ့ရှိချက်ဆင်တူ, ဦးနှောက်ဒေသများဒေသများဖြတ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism ပြသပါ။ Caudate volumes ကို, Giedd (ထိုဆယ်ကျော်သက်နှစ်တာကာလအတွင်းလျော့ချနှင့်အမျိုးသမီးအတွက်အတော်လေးပိုကြီးများမှာ 2004) ။ parietal, ယာယီနှင့် occipital ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးမတူဘဲ, ကြီးမားတဲ့ခန္ဓာဗေဒကွဲပြားခြားနားမှု Sowell et al (ထိုတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးနှင့် striatum အတွက်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားပေါ်ပေါက်လာကြသည်။ , 1999), အဲဒီနှစျခုဒေသများလူကြီးနှိုင်းယှဉ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အတော်လေးနုဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု။ နောက်ထပ်အဲဒီတွေ့ရှိချက် dopamine-related အပြုအမူတွေနဲ့သင်ယူမှုဖျန်ဖြေခြင်းအလိုငှါ, ဤဒေသများတွင်ဆက်လက် plasticity အကြံပြုအပ်ပါသည်။
functional MRI (fMRI) အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု (Bandettini နှင့် Ungerleider ပြောင်းလဲမှုများရောင်ပြန်ဟပ်မှယူဆသောဦးနှောက်ထဲမှာသွေးအောက်ဆီဂျင်ပြောင်းလဲမှုများဖမ်းယူကြောင့်ဦးနှောက်ကို Activation တစ်တိုင်းတာခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေး, 2001; Logothetis et al ။ , 2001) ။ လူမှာ dopamine စနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလေ့လာဖို့, စုံစမ်းစစ်ဆေးအဓိကအား midbrain, striatal နှင့် prefrontal ဒေသများ (Koob နှင့် Swerdlow, dopamine ဆဲလ်အသေကောင်နှင့်စီမံကိန်း၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေရန်လူသိများအာရုံကြောဒေသများတွင် neurodevelopment လေ့လာခဲ့ကြ 1988) ။ fMRI ရိုးရှင်းစွာအာရုံခံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုယူဆရအညွှန်းကိန်းသည်အတိုင်း, ဒီ tool ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချကြောင်းလေ့လာမှုများကျိန်းသေ dopamine စကားရပ်နှင့် / သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများကိုကောက်ချက်ချလို့မရပါဘူး။ သို့သော်တိရစ္ဆာန်အမော်ဒယ်များမှသည်စုဆုံနည်းလမ်းများနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို အသုံးပြု. လူသားများအတွက်အလုပ်နောက်ထပ် dopamine ကြွယ်ဝ circuitry ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုစုံစမ်းမှစတင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့, ကနဦးလေ့လာမှုများ striatal လှုပ်ရှားမှု (ဥပမာ, Knutson et al ဆွဲထုတ်ခြင်းအပေါ်ဆုလာဘ်တွေရဲ့အားကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုဖေါ်ပြခြင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူသားတွေအတွက်အစီရင်ခံစာများပေးထား, ဒီ circuitry သို့အသာပုတ်ပါတစ်လမ်းအဖြစ်ဆုလာဘ် Paradigm ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြ။ , 2001; ဂူနှင့် Bern, 2002) ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအမှန်ပင်, ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ငွေကြေးနှင့် nonmonetary ဆုလာဘ် (ဥပမာ Bjork et al နှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါလူကြီးများကျင့်သောတူညီအာရုံကြော circuitry စုဆောင်း, ထိုပြခဲ့ကြ။ , 2004; Ernst et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006; ဗန် Leijenhorst et al ။ , 2009) ။ သို့သျောလညျး ဘယ်လို မြီးကောင်ပေါက်အာရုံကြောစုဆောင်းမှုအတွက်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည့်မှတ်ဥာဏ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမှ neuroscience စာပေအတွက်ဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ဆုလာဘ် sensitivity ကို၏မညီမျှမှု fMRI တွေ့ရှိချက်
ဆုလာဘ်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ fMRI လေ့လာမှုများတိုက်ရိုက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားနှစ်ခုယူဆချက်ပေါ်သို့ map နှစ်ခုအဓိကတွေ့ရှိချက်လြှော့ပါပြီ။ ပထမဦးဆုံးအလူကြီးများမှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်, ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်အတွက် ventral striatum ၏လျော့နည်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုပြသကြောင်းအကြံပြု (Bjork et al ။ , 2004) ။ Bjork နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကအစောပိုင်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်ငွေကြေးမက်လုံးပေးနှောင့်နှေးများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်နှင့်ကျယ်ပြန့်အရွယ်ရောက်နမူနာများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့် (MID) တာဝန်, (ဥပမာ Knutson et al အပေါ်အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးအုပ်စု။ , 2001) ။ အဆိုပါလယ်လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ပါဝင်သူပထမခုနစ်တွေကိုတဦးတည်းနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးနှောင့်နှေးပွီးနောကျ, သူတို့ကပစ်မှတ်ကိုနှိပ်ခိုင်းတယ်နှင့်နောက်ဆုံးတော့တုံ့ပြန်ချက်သူတို့ကစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းပိုက်ဆံအနိုင်ရသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရှိမရှိသင်တန်းသားများကိုအကြောင်းကြားရန်တင်ပြခဲ့ပါသည်။ အလားတူအပြုအမူစွမ်းဆောင်ရည်နေသော်လည်းစာရေးသူအသက်အုပ်စုများအကြားသိသာထင်ရှားသောအာရုံကြောကွဲပြားခြားနားမှုကိုတွေ့, ထိုကဲ့သို့သောကြောင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်နှိုင်းယှဉ်ဆုလာဘ်အတွက်မျှော်လျော့နည်း ventral striatal activation ပြသခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်ချက်မှတုန့်ပြန်မအုပျစုကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည်။ Bjork နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကမြီးကောင်ပေါက်တစ် ventral striatal activation လိုငွေပြမှုရှိသည်သောအယူအဆများအတွက်ထောက်ခံမှုအတိုင်းဤဒေတာကိုဘတ်ပါ၏။ အဲဒီမြီးကောင်ပေါက်အနိမ့် ventral striatal လှုပ်ရှားမှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးအပ်တဲ့လမ်းအဖြစ်အစွန်းရောက်မက်လုံးပေး (ဥပမာအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေ) 'အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းဖြစ်ပါသည် (လှံ, 2000; Bjork et al ။ , 2004) '။
Bjork နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကပိုမကြာသေးမီကနှစ်ဆနမူနာအရွယ်အစားနှင့်တစ်ဦးတိုးတက်လာသော headcoil သုံးပြီးတွင်ဤတွေ့ရှိချက်ပုံတူကူးယူခဲ့ကြပေမယ့်လည်း (Bjork et al ။ , ပြင်ဆင်မှု, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်ရေးအတွက်), မြောက်မြားစွာစာတမ်းများဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်တွေကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ (မေ et al ။ , 2004; Ernst et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006; ဗန် Leijenhorst et al ။ , 2009). ဒီလေ့လာမှုတွေကအခြားအသက်အရွယ်အုပ်စုများမှဆွေမျိုး, ထိုပြသပြီ, ဆယ်ကျော်သက်ဆုချမှတုံ့ပြန်မှုအတွက် ventral striatum အတွက် သာ. ကြီးမြတ် activation ပြသပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အတွက်ကလေးများ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများရိုးရှင်းတဲ့, လူငယ်-ဖော်ရွေတာဝန်လုပ်ဆောင်ဖို့တောင်းခဲ့သည် ကွဲပြားခြားနားသောဆုလာဘ်တန်ဖိုးများကိုမှန်ကန်တုံ့ပြန်မှု (သွပ်ရည်စိမ် et al အောက်ပါကယ်နှုတ်ခဲ့ကြရာအတွက်စကင်နာအတွက်။ , 2006). ကလေးများနှင့်လူကြီးများမှဆွေမျိုး, အဆယ်ကျော်သက်အုပ်စုသည်ဆုလာဘ်အတွက်မျှော်မြင့် ventral striatal activation ပြသခဲ့သည်။ အခြားဥပမာထဲမှာ, Ernst et al ။ (2005) မြီးကောင်ပေါက်စမ်းသပ်မှုတွေအနိုင်ရစဉ်အတွင်းလူကြီးများထက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်လက်ဝဲ NACC လှုပ်ရှားမှုစုဆောင်းပြသနေတဲ့ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာငွေကြေးဆုလာဘ်တာဝန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်တိုက်ရိုက် Bjork စက္ကူနှိုငျးယှဉျနှင့် ventral striatal စိတ်ခွန်အားနိုးဆားကစ်၏အချိုးအစားမမျှတိုးပွားလာ activation ဆယ်ကျော်သက် neurodevelopment နှင့်အပြုအမူရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့သောအယူအဆများအတွက်ထောက်ခံမှုချေး (ကုန်သည်များ et al ။ , 2003) ။ ဗန် Leijenhorst et al နေဖြင့်မကြာသေးမီကစက္ကူ။ (2009) အဖြစ်ကောင်းစွာ Hyper-တုံ့ပြန်မှုအမြင်ထောက်ခံပါတယ်။ အလားတူအလုပ်၏အများစုမှမတူဘဲသူတို့အပြုအမူအပေါ်မှီခိုမဟုတျကွောငျးတခု fMRI ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါကသင်တန်းသားများ့မှုသည်လည်းကောင်းဆက်ဆက်သို့မဟုတ်အမှတ်တမဲ့နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ်ခန့်မှန်းကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုအားပေးသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများတာဝန်များကိုများ၏အမူအကျင့်အစိတ်အပိုင်းအားဖြင့်ရှက်ကြောက်ခဲ့ကြပေမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဤချဉ်းကပ်မှုအထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်။ သူတို့ရဲ့အဓိကတွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်လက်ခံရရှိ (ဗန် Leijenhorst et al ဆုချမှတုန့်ပြန်ကလေးများသို့မဟုတ်လူကြီးများထက် သာ. ကြီးမြတ် striatal activation ကိုပြသသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ , 2009), ဆုလာဘ်အပြုအမူအပေါ်ဆက်ပြောပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်အရှင်လှုံ့ဆျောမှုမရှိကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ပင်သောအခါအကြံပြုခြင်း, ဆယ်ကျော်သက်ဆုချမယ့် Hyper-တက်ကြွ striatal တုံ့ပြန်မှုပြသပါ။
ဤရွေ့ကားဆန့်ကျင်တွေ့ရှိချက်နောက်ထပ် dopamine စနစ်ကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပြောင်းလဲဘယ်လို ပတ်သက်. ဆွေးနွေးငြင်းခုံလောင်စာနှင့်ကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး dopamine လွှတ်ပေးရန်နှိုင်းယှဉ် Basal ၏ထင်ရသောခြားနားတွေ့ရှိချက် mirror ။ အတော်လေးပိုပြီးသက်သေအထောက်အထားများအဆုံးစွန်သောအမြင်ထောက်ခံမှုရှိကြောင်းပေးထား, ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုလယ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းယင်း striatal စနစ်ကဆုလာဘ်များနှင့်မက်လုံးပေးဖို့ Hyper-တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါသည်, သောအယူအဆအပေါ်ဆုံပြီအကြံပြု (Ernst et al ။ , 2009; Somerville et al ။ , 2009) ။ သို့သော်ထိုသို့မတူညီသောရလဒ်များကိုတချို့ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ရှင်းလင်းချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်။
လေ့လာမှုများအကြားဒီကဗျာကွဲပြားမှုများအတွက်အများအပြားဖြစ်နိုင်သောရှင်းလင်းချက်ရှိပါတယ်။ စားပှဲ Table11 ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်အများဆုံးကိုးကားစာတမ်းများအတွက်မတူကွဲပြား၏အဓိကဒေသများအကျဉ်းချုပ်။ ဤသည်စားပွဲပေါ်မှာပြည့်စုံစေ့စပ်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သာပုံမှန်အားဖြင့်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲခုနှစ်တွင်ကောက်ယူအလုပ်ပါဝင်သည်သည်မဟုတ်, လက်တွေ့လူဦးရေထဲကနေဒေတာတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်မဟုတ်။ ပထမဦးစွာလေ့လာမှုများသင်တန်းသားများ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်နှင့်အသက်အရွယ်၌အလွန်ကွာခြား။ ဒုတိယအချက်မှာလေ့လာမှုများနှိုင်းယှဉ်အဖွဲ့များကိုအတွက်ကွာခြား။ နောက်ဆုံးတာဝန်ဒီဇိုင်း, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အခြေခံအခြေအနေများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအနက်အတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ အဘယ်မှာသင့်လျော်သော, အကြံပေးချက်များနှင့်အနာဂတ်အလုပ်တွင်ဤအတိုင်းအတာများကွဲပြားမှုဖော်ပြထားကြသည် minimize လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေမဟာဗျူဟာများ။
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ fMRI ဆုလာဘ်လေ့လာမှုများ.
လေ့လာမှုများတလွှားနှင့်အကြား underappreciated ကြောင်းတစ်ဦးကသိသိသာသာကိစ္စကိုလူသားများတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် defining ၏ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လုပ်နိုင်နှင့်အသက်အရွယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျ့, အပျိုဖော်ဝင်, ဆရာ, ဆရာမများ, သိပ္ပံပညာရှင်များ, မူဝါဒချမှတ်သူများနှင့်မိဘများအပါအဝင်ကျွမ်းကျင်သူများကများစွာသောလူတို့ကပညာရေးဆိုင်ရာတန်း, ပညတ္တိကျမ်း, နှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ရေးအပါအဝင်တစ်ဦးများပြားလှသောနည်းလမ်းများဖြင့်သတ်မှတ်သည်။ အဆိုပါထင်ရသောအဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်သောအဓိပ္ပာယ်ပေးသည်, ဆယ်ကျော်သက်သုတေသီများသူတို့၏ "ဆယ်ကျော်သက်" နမူနာများတွင်ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သောတစ်ဦးချင်းစီဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွက်စိတ်ညစ်စရာတာဝန်ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ တချို့ကသိပ္ပံပညာရှင်များကလေးဘဝထဲကနေလူကြီး (လှံဖို့အကူးအပြောင်း၏တဖြည်းဖြည်းကာလ '' အဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖော်ထုတ်ကြပါပြီ, 2000; Dahl, 2004) '။ အလုပ်၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအလောင်းတွေဖော်ပြတဲ့အခါမှာဒီကျယ်ပြန့်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အသုံးဝင်သည်နေစဉ်, စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၌ရှိသကဲ့သို့, ကဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများတွင်ထည့်သွင်းခံရဖို့ပါဝင်သူနမူနာသတ်မှတ်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးလမ်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီပင်ကိုယ်မူလအလုပ်အတွက်မသင့်လျော်သည်အကြောင်းပြချက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇီဝနှင့်လူမှုရေးအရမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့သောကျယ်ပြန့်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောသည်။
အချို့သောအုပ်စုများသွပ်ရည်စိမ် et al (အထက်တန်းကျောင်းသားများအတွက်ဖို့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုနမူနာများ၏ပါဝင်မှုကန့်သတ်နေစဉ်။ , 2006; Geier et al ။ , 2009) နှင့်အုပ်စုတစ်စု inarguably မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (ဗန် Leijenhorst et al ဖမ်းမိထားတဲ့အသက်အရွယ်-ကန့်သတ်ဆယ်ကျော်သက်အုပ်စုတစ်စုပါဝင်သည်။ , 2009စားပွဲတင်စာရင်းဝင်ကျန်ရှိနေသေးသောလေ့လာမှုများအတွက်ဆယ်ကျော်သက်အုပ်စု), အသက်အကွာအဝေး Table11 ကျယ်ပြန့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဥပမာ, Bjork et al ။ (2004), မေလ et al ။ (2004) နှင့် Ernst et al ။ (2005) လေ့လာမှုများသူတို့၏ "ဆယ်ကျော်သက်" နမူနာ၌ (အဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုများ 12 နှစ်ရှိပြီမှာတောင်မှအငယ်ကလေးများပါဝင်သည်)9နှစ်အရွယ်ကလေးများလည်းပါဝင်သည်။ တစ်ဦး 12 နှစ်အရွယ်အချို့ပညာသင်နှစ်စက်ဝိုင်းတစ်ခုအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်စဉ်းစားစေခြင်းငှါနေစဉ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦး9နှစ်အရွယ်များအတွက်တူညီပြောဆိုချက်ကိုအောင်ရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦး 12 နှစ်အရွယ်အစောပိုင်းသို့မဟုတ် Pre-ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရနိုင်လျှင်တောင်မှအပြင်, ထိုတစ်ဦးချင်းစီဆိုသညျကားထက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်ပါသည်, ယူဆရပိုပြီးလွတ်လပ်ရေးရှိသူတစ်ဦး 17 နှစ်အရွယ်, စေ့စပ်တော်မူပြီးမှတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ် အန္တရာယ်များနှင့်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူ၌၎င်း, ပိုက်ဆံ၏တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလေးမွတျ (ဤလေ့လာမှုများအတွက်အသုံးအများဆုံးဆုလာဘ်) ရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ခွဲခြားထားပါသည်ဘယ်လိုစံချိန်စံညွှန်းများကိုသတ်မှတ်ပေးရန်လယ်ပြင်အဘို့အချိန်ရှိ၏ ဒီအခုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (Shaw et al အတွက်အများဆုံးကြွေတဲ့များစွာကိုဦးနှောက်ဒေသများအတွက် nonlinear ပုံစံကိုလိုက်နာကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများရှိသည်, အထူးသဖြင့်အလွန်အရေးပါသည်။ , 2008) ။ အလွန်အနည်းဆုံး, စုံစမ်းစစ်ဆေးအသက်အုပ်စုများသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်ဘယ်လိုအစီရင်ခံရန်ပိုမိုကြိုးပမ်းလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအဓိပ္ပာယ်ဟာအထူးသဖြင့်အသက်, အပျိုဖော်ဝင်, ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းမှာတစ်နှစ် (ဥပမာ, သာအထက်တန်းကျောင်းသားများ) တို့ပါဝင်သည်ပေလိမ့်မည်။ ကျယ်ပြန့်အသက်အပိုင်းအခြားရယူနေစဉ်ဆန်းစစ်ဖို့ပုံမှန်အားဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအလုပ်အတွက်စံပြစံနှုန်းဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲအဆိုပါစမ်းသပ်မှုအသက်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစဉ်ဆက်တန်ဖိုးထားဖို့ကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ကောက်ယူလျှင်, ဒီချဉ်းကပ်မှုသာအသုံးဝင်သည်။ အကြောင်း, အသက်အရွယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြတ်ပြီးတစ်ဦးချင်းစီအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဆန်းစစ်ဖို့ regressor အဖြစ်ထည့်သွင်းလျှင် early-, အလယ်အလတ်နှင့်အနှောင်းပိုင်းတွင်-မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သာကြီးထွားသိကောင်းစရာများဖြစ်ပါတယ်ပါဝငျသောကျယ်ပြန့်အသက်အပိုင်းအခြားသည်။ အဲဒီအစား, အားလုံးလေ့လာမှုများအုပ်စုသည်အထက်က "ဆယ်ကျော်သက်" နမူနာဖော်ပြထားနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူး၏အားသာချက်ကိုယူပြီးမရှိဘဲ, နှိုင်းယှဉ်အုပ်စုတစ်စုကနှိုင်းယှဉ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအချုပ်ဆင်း whittled သည်အချိန်အားဖြင့်, အယေဘူယျမက်ဆေ့ခ်ျကိုအသက်အရွယ်အတွက်သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြမှဂရုမစိုက်ဘူး။
မြီးကောင်ပေါက်များအတွက်သင့်လျော်သောနှိုင်းယှဉ်မှုအုပ်စုကိုဖော်ထုတ်နီးပါးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် defining အဖြစ်အခက်အခဲကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြားနယ်နိမိတ်မကြာခဏမှေးမှိန်လာကြောင့်ဤအဖော်ထုတ်ခြင်းစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောစုံစမ်းစစ်ဆေးကလေးတစ်ဦး (ဗန် Leijenhorst et al ကဲ့သို့သော 12 နှစ်အရွယ်ခွဲခြားမယ်လို့နေစဉ်။ , 2009), အခြားသူများဆယ်ကျော်သက်အုပ်စုသည် (Bjork et al အတွက်တူညီသောကလေးကပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ , 2004; et al May ။ , 2004; Ernst et al ။ , 2005) ။ အလားတူပင်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလေ့လာမှုများအပါအဝင်အများဆုံး neuroimaging လေ့လာမှုများသည်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူအုပ်စုတစ်စုအဖြစ် 18- နှင့် 19 နှစ်အရွယ်ပါဝင်သည်။ ဒီအလေ့အကျင့်ဖွယ်ရှိနှစ်ခုမူလတန်းအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပျေါထှနျးထားပါတယ်: လူကြီးများနှင့် (1) ကောလိပ်ကျောင်းသားစုဆောင်းမှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လွယ်ကူသောဘာသာရပ်ရေကူးကန်ရှိပါတယ်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ (18),2နှစ်အရွယ်ဥပဒေဖြင့်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဤထပ်တိုးမြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများနှောင်းပိုင်းတွင်-နှစ်ဆယ်ကျော် (Giedd, ရန် mid- မှတဆင့်ဦးနှောက်၏အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတင်ကြပါပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းဆက်ရှိနေသေး 2004) နှင့်ဒီနှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်အသက်အပိုင်းအခြားအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ၏မေးခွန်းကိုရင့်ကျက်သဘောထား။ ဒါကြောင့်အသက်အရွယ်အတွက်ဆိတ်ကွယ်ရာသာလအနည်းငယ်၌နေသောသူတစ်ဦးချင်းစီ (ဥပမာ, တစ်ဦး 17 နှစ်အရွယ်နှင့်တစ်ဦး 18 နှစ်အရွယ်) Geier et al (အသီးသီးဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ အတော်လေးဖြစ်နိုင်သောထိုကဲ့သို့ဖြစ်သကဲ့သို့ 2009) သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှိုင်းယှဉ်အုပ်စုသည်အမှန်တကယ်အနေနဲ့တိကျမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အုပ်စုတစ်စုသည်ဖြစ်စေ၏မေးခွန်းကိုအသနားခံ။
အခြေခံအားဖြင့်တူညီသညျ့မေးခှနျး (ဆုချတုံ့ပြန် dopamine ကြွယ်ဝ striatal circuitry ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းကဘာလဲ?) တောင်းဆိုနေတာနေသော်လည်း, ဒီမှာဖော်ပြထားခြင်းမရှိနှစ်ခုကိုစမ်းသပ် Paradigm ရောနှောများမှာ။ အခြို့သောဆုလာဘ်ပြင်းအား (Bjork et al ။ , အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေချိန်တွင် 2004; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006), အခြားသူများကိုကြိုးကိုင်ဆုလာဘ်ဖြစ်နိုင်ခြေ (မေ et al ။ , 2004; ဗန် Leijenhorst et al ။ , 2009) သို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး (Ernst et al ။ , 2005; Eshel et al ။ , 2007) ။ ထို့ပြင်အားလုံးအတွက်မဟုတ်တဦးတည်းလေ့လာမှု (ဗန် Leijenhorst et al ။ , 2009), ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်အပါအဝင်သင်တန်းသားများကို '' အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု (ဥပမာ Bjork et al အပေါ်မှီခိုခဲ့ကြ။ , 2004) နှင့်တုံ့ပြန်မှုတိကျမှန်ကန်မှု (Ernst et al ။ , 2005; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006; Eshel et al ။ , 2007) ။ တုံ့ပြန်မှုအချိန်အမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုစွမ်းရည်အတွက်လူသိများဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုပေးထား, task ကို၏အခက်အခဲအာရုံကြော activation ပုံစံများအပေါ်ကြီးမားတဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့နိုင်ဘူး။
စားပွဲတင်အတွက်စာရင်းလေ့လာမှုများအကြားနောက်ထပ်သိသာခြားနားချက် Table11 အသုံးပြုသောတာဝန်များကိုနှင့်ပြီးသောသူတို့ကြီးထွားသင့်လျော်သောခဲ့ကြသည်ဖို့ degree ၏ကျယ်ပြန့်သည်။ အလုပ်တခုကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် comprehension အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအာရုံကြော activation အပေါ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်အဖြစ် Task ကိုရှေးခယျြမှုတစ်ခုအသေးအဖွဲကိစ္စမဟုတ်ပါ။ အချို့သောလေ့လာမှုတွေဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလူဦးရေကသူတို့ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံရှာတွေ့မယ်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေတိုးမြှင့်ဖို့အတွက်တာဝန်များကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေစဉ် (သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006; ဗန် Leijenhorst et al ။ , 2009), ကာတွန်းကဲ့သို့လှုံ့ဆော်မှုများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းအဖြစ်တာဝန်ဖော်ပြခြင်းဖြင့်ကဲ့သို့သော (ဥပမာ) "သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုတတ်နိုင်သမျှပိုက်ဆံကဒီဗီဒီယိုဂိမ်းထဲမှာပင်လယ်ဓားပြကူညီရန်ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်" အခြားသူများကိုရိုးရှင်းစွာလူကြီးများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြကြောင်းတာဝန်များကိုအကောင်အထည်ဖော် (ဥပမာ, Bjork et al ။ , 2004; et al May ။ , 2004) ။ ဒါကအဆုံးစွန်သောချဉ်းကပ်မှုအများအပြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာလူကြီးများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ fMRI အလုပ်များကိုအသုံးပြုမှုလူငယ်လူကြီးများလုပ်ပေးအဖြစ်ဆက်ဆံအဖြစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-သင့်လျော်သောတာဝန်များကိုတှေ့လိမျ့မညျသောယူဆချက်အောက်မှာပြုနေသည်။ ဒုတိယအချက်, ဒီကိုလည်းကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အဆိုပါတာဝန်များကိုအဖြစ်လူကြီးများနားမလည်လိမ့်မည်ဟုယူဆ။ တတိယ, ဒီချဉ်းကပ်နည်းကလေးနှင့်မြီးကောင်ပေါက်လေ့လာနေသည့်အခါအထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားချတဲ့ကျယ်ပြန့်ပေါ့ဆမှုတစ်ခုကံဆိုးပုံဥပမာဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးဖွယ်ရှိကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဖို့စိတ်မဝင်စားကြလိမ့်မည်ကြောင်းတာဝန်များကိုသုံးပြီးအဆင်ပြေနေကြသည်လျှင်စုံစမ်းစစ်ဆေးအလားတူကလေးကသေချာအဆင်ပြေများနှင့်အတွေ့အကြုံအဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, ဥပမာ (အထူးကလေးဖော်ရွေစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အလေ့အကျင့်အကောင်အထည်ဖော်ရန်လစျြလြူရှုလျှင်ဥပမာ,, တဦးတည်းတွေးမိစေခြင်းငှါ, စိုးရိမ်စိတ်-လျှော့ချတတ်နိုင်သမျှ)။ လူငယ်-ဖော်ရွေတတ်နိုင်သမျှအတိုင်းတာဝန်များကိုအောင်သေချာစေရန်အချို့အကြံပြုချက်များ, ကာတွန်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ကာတွန်းလှုံ့ဆော်မှုကို အသုံးပြု. (လေ့လာမှုတစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ကလေးများအရွယ်ရောက်ထက်ပိုရှည်တုံ့ပြန်မှုကြိမ်ရှိသည်ပြသကြကဲ့သို့) သားသမီးတို့အဘို့သင့်လျော်သောတုံ့ပြန်မှုအချိန်သေချာနှင့် task ကိုအောင်ပါဝင်သည် တတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းသောထိုသူငယ်အွန်လိုင်းကျင်းပရန်လိုအပ်ကြောင်းမျိုးစုံအခြေအနေများနှင့်စည်းမျဉ်းများမပါဘဲ။ ဥပမာအားဖြင့်, ခုနစျပါးကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုပုလယ်လုပ်ငန်းတာဝန် (Knutson et al အတွက်သတိရဖို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါလိမ့်မယ်နေစဉ်။ , 2001), ဆယ်ကျော်သက် (Bjork et al ဒီတာဝန်ဝယ်လိုအားထက်ပိုခက်ခဲတွေ့ပါလိမ့်မည်။ , 2004) နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်တာဝန်အတွက်လျော့နည်းဆောင်ရွက်နေဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါအတော်လေးပိုပြီးဆောင်ရွက်နေလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤနောက်ဆုံးမှာ, လျော့နည်းအာရုံကြော activation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။
နီးပါးဆက်ဆက်ရလဒ်များကိုအတွက်ကွဲပြားမှုမှလှူဒါန်းခဲ့သောအပိုဆောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏စင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအ fMRI အလုပ်များကိုအားလုံးသုံးအခြေခံအဆင့်ဆင့်ထည့်သွင်း: cue တင်ဆက်မှု, အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအောက်ပါဆုလာဘ်၏မျှော်လင့်ခြင်း, တုံ့ပြန်ချက်။ ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှု၏, သုံးလေ့လာမှုများဆုလာဘ် (Bjork et al ၏မျှော်လင့်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ , 2004; သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006; Eshel et al ။ , 2007), သုံးလေ့လာမှုများ Bjork et al (တုံ့ပြန်ချက်မှတုံ့ပြန်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ , 2004; Ernst et al ။ , 2005; ဗန် Leijenhorst et al ။ , 2009) နှင့်တဦးတည်းလေ့လာမှုအဆင့်ဆင့်အကြားခွဲခြားခြင်းနှင့်အစားတစ်ခုလုံးကိုရုံးတင်စစ်ဆေး (မေ et al ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ပါဘူး။ , 2004) ။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဤကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာအတွက်အခက်အခဲယာယီ Proximity ဖြစ်ရပ်များ (ဥပမာ, အ cue နဲ့မျှော်လင့်အဆင့်) ကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး fMRI ထွက်ဆန်းစစ်ရန်ခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့တွင်ဤသူတစ်ဦးတည်းသာအဆင့်အကျိုးစီးပွားစဉ်, အခြားအဆင့်ကနေ MR signal ကို activation သို့တာကတော့ခဲ့ကြပေမည်ဆိုလိုသည်။ သုတေသီများတာဝန်များထဲမှရှုထောင့်ဆနျးစစျဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ကြပေမည်စဉ်တနည်းအားဖြင့်သူတို့ကတိုင်းတာ (နှင့်သတင်းပို့) ခဲ့ကြပေမည် task ကိုနောက်ထပ်ရှုထောင့်။ အဆိုပါကုန်ကြမ်းဒေတာမရှိရင်ဒီဖြစ်ရပ်ကြီးလျှင်စာတမ်းများထံမှစပါးကျန်ကိုကောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေမတူညီသောရလဒ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများ၏အာရုံစိုက်တူညီခဲ့လျှင်ပင်ဖော်ပြခဲ့သည်ရှင်းပြပေမည်။ ဥပမာ, Bjork et al နေစဉ်။ (2004) နှင့်သွပ်ရည်စိမ် et al ။ (2006) နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဒေတာလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြသည်, အမျှော်လင့်အဆင့်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင် Ernst et al နေစဉ်။ (2005) နှင့်ဗန် Leijenhorst et al ။ (2009) တုံ့ပြန်ချက်, Bjork et al စဉ်အတွင်းလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆယ်ကျော်သက်အတွက် သာ. ကြီးမြတ် ventral striatal activation သတင်းပို့ပါ။ (2004) ကိုတုန့်ပြန်ချက်ထူးခွားသညျ့မဆိုအတွက်အုပ်စုများအကြားမည်သည့် activation ကွဲပြားခြားနားမှု detect လုပ်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
Geier et al နေဖြင့်တစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု။ (2009) မြီးကောင်ပေါက်တာဝန်အမျိုးမျိုးအဆင့်ဆင့်စဉ်အတွင်းကွဲပြား activation profile များကိုရှိစေခြင်းငှါဘယ်လိုဖော်ပြသည်။ ဤရွေ့ကားစာရေးဆရာများပါးနတိကျစွာတာဝန်များ၏ကွဲပြားအဆင့် deconvolve နိုင်စေဖို့ task ကိုဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့တာပါ။ အဆိုပါ cue အစိတ်အပိုင်းစဉ်အတွင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်မှနှိုင်းယှဉ် ventral striatum အတွက် attenuation တုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်။ လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်သို့သော်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း, တူညီတဲ့မြီးကောင်ပေါက်, တူညီတဲ့ဒေသတွင်မြင့်လှုပ်ရှားမှုပြသခဲ့သည်။ စုပေါင်းအဲဒီဒေတာဆုလာဘ်အလုပ်များကိုယာယီကွဲပြားရှုထောင့်ကိုသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုလိုက်လျောဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ဆယ်ကျော်သက် striatum နှင့်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုအကြောင်းကိုသိမ်းကျုံးယေဘုယျချတဲ့အခါဂရုတစိုက်စဉ်းစားသင့်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ၏အနက်ကိုဤပြောင်းလဲ (Kotsoni et al detect လုပ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ပုံရိပ်နည်းလမ်းများ၏ sensitivity ကိုနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါတယ်။ , 2006) ။ ထိုအသွေးကိုအောက်စီဂျင်အဆင့်ကိုမှီခို (BOLD) signal ကိုအများဆုံး fMRI လေ့လာမှုများအတွက်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုဟာအတိုင်းအတာအဖြစ်အသုံးပြုသည်နှင့်အမျှနှလုံးခုန်နှုန်း, နှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အသက်ရှူအပါအဝင် variable တွေကိုအမျိုးမျိုးအတွက် hemodynamic တုံ့ပြန်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ ဥပမာ, သားသမီးများအတွက်နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမှုနှုန်းနီးပါးကိုနှစ်ကြိမ်လူကြီးများ (Kotsoni et al ရှိသူတို့ဖြစ်ကြသည်။ , 2006) ။ သူတို့ကြောင့်အဆုတ်နှင့်အမြှေး (ဗန်က de Moortele et al ၏လှုပ်ရှားမှုမှပဲ့တင်သံပြိုများနှင့်လိမ်ပုံရိပ်ပိုမိုဆူညံသံမိတ်ဆက်ပေးနိုငျသောကွောငျ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြတ်ပြီးဤရွေ့ကားဇီဝကမ္မကွဲပြားခြားနားမှုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neuroimaging လေ့လာမှုများအတွက်သိသာထင်ရှားသောစိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်။ , 2002) ။ သင့်လျော်တဲ့အခြေခံဖော်ထုတ်သည့်အခါကဲ့သို့သောဤဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။ Thomason et al ။ (2005သင်တန်းသားများကိုအလုပ်တစ်ခုအတွက်ပါဝငျစရာမလိုဘဲစကင်နာထဲမှာပုံမှန်အားဖြင့်ရှူရှိုက်နေစဉ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများသည် fMRI အချက်ပြမှုကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုဆန်းစစ်သည်။ သူတို့ကကလေးများ၏အချက်အလက်များတွင်ပိုမိုဆူညံသံများအပြင်ဤဆူညံသံသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ရာခိုင်နှုန်းအချက်ပြပြောင်းလဲမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကလေးများ၏“ အခြေခံ” ကို ပိုမို၍ အားဖြည့်ပေးသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ စကင်နာတွင် passive အနားယူခြင်း (Thomason ၏ပါ ၀ င်သူများရရှိသည့်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ဆင်တူသည်) အများအားဖြင့်အခြေခံအခြေအနေအနေဖြင့်သိမှုဆိုင်ရာတာဝန်အခြေအနေများအားလုံးနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသောကြောင့်ဤကွဲပြားခြားနားမှုများသည် fMRI ၏ရလဒ်များနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုများအပေါ်သိသိသာသာဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ Schlaggar et al ကဲ့သို့အခြေခံပြissuesနာများကိုဤကျယ်ပြန့်စွာဆွေးနွေးခြင်းသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ (2002) ယခင်ကသင့်လျော်သောနှိုင်းယှဉ်မှုအလုပ်များကိုပြဿနာကိုကြီးပြင်းခဲ့ကြသည်။ ကလေးများ (နှင့်မြီးကောင်ပေါက်) display ကိုတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်အခြေခံပြည်နယ်များအနားယူလျော့နည်းသွားခြင်းရှိမရှိနောက်ဆုံးရလဒ်နှင့်အခြေခံပြဿနာထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်တာဝန်ဒီဇိုင်းနှင့်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစဉ်အတွင်းများအတွက်ထိန်းချုပ်မရလျှင်သူတို့ရဲ့ဒေတာလူကြီးများ '' ဒေတာများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြသောအခါရလဒ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသြဇာလွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်သည်။
baseline ၏အနည်းဆုံးသုံးမျိုးကိုဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ Bjork et al ။ (2004ယုတ် signal ကိုတန်ဖိုးတစ်ခုလုံးကိုအချိန်စီးရီးကိုဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှအဖြစ်) ကိုအခြေခံသတ်မှတ်။ အဆိုပါ Ernst et al ၌တည်၏။ (2005) စက္ကူ, 18 ၏ 129 () စမ်းသပ်မှုတွေအခြေခံအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်း fixation စမ်းသပ်မှုတွေခဲ့ကြသည်။ ဒါကအကျိုးစီးပွားအားလုံးထူးခွားသညျ့အဆိုပါပါဝင်သူ Thomason et al ရည်ညွှန်း (က fixation လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာစိုက်ကြည့်ပေမယ့်ဘာမှလုပ်ခံရဖို့ယူဆခဲ့သည့်အတွက်စမ်းသပ်မှုတွေနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်ဖြစ်ပါသည်။ , 2005 အထက်ကဒီပြဿနာဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့သတိပြုပါရန်) ။ အလားတူပင်သွပ်ရည်စိမ် et al ။ (2006) အပါဝင်သူတစ်ဦး fixation လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်အတူတင်ဆက်ခဲ့သည့်ကာလအတွင်းဆွေမျိုးအခြေခံ, အဖြစ် intertrial ကြားကာလကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗန် Leijenhorst et al ။ (2009) နှင့် Geier et al ။ (2009)) မသေချာမရေရာဆုလာဘ်ရုံးတင်စစ်ဆေးအမျိုးအစားများကိုနှိုင်းယှဉ်ဥပမာအချို့ (တစ်သွယ်ဝိုက်အခြေခံသတ်မှတ်နှင့်အစားကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်မှု types များအကြားဆနျ့ကငျြဘပုံရိပ်တွေထုတ်ပေးခဲ့ပါဘူး။ အားလုံးစာရေးဆရာများယူဆရသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အခြေခံရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းပြချက်ကောင်းခဲ့မရှိစံအခြေခံလယ်၌ကား, ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, အခြေခံအတွက်သေးငယ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုနောက်ဆုံးရလာဒ်များအပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မား (သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်း) ရှိသည်ဆိုပါကလူကြီးများထက်အခြေခံအနားယူ, fMRI အတွက်အသုံးပြုတဲ့အနုတ်နည်းလမ်း (ဥပမာပုံရိပ်ကိုထူးခွားသညျ့နှိုင်းယှဉ်) မမှန်ကန်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမည်အကြောင်းလေ့လာဆန်းစစ်။
စံအခြေခံအပေါ်သို့သဘောတူဖြစ်နိုင်မဟုတ်သလိုအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေမယ့်မေးခွန်းတွေနဲ့စမ်းသပ်တာဝန်များကိုအတွက်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတစ်ဦးချင်းအခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုခိုင်လုံသည်အတိုင်း, တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုများအတွက်ရွေးကောက်တော်မူသောအခြေခံအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ကြောင်းသေချာစေရန်နည်းလမ်းများရှိပါသည်။ fMRI signal ကိုအနားယူတွင်ဤမွေးရာပါဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုကျော်လွှားဖို့တလမ်းတည်းဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီအုပ်စုသီးခြား baseline တည်ထောင်ရန်, ပြီးတော့အတွင်း-အုပ်စုတစ်စုတာဝန်အခြေအနေများနှိုင်းယှဉ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော FSL အဖြစ်အများအပြား neuroimaging ဆော့ဖျဝဲ packages များ, စာရင်းအင်းအဖွဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်မထိခိုက်စေဘဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဤအမျိုးအစားဘို့ခွင့်ပြုပါ။ တစ်ဦးကစက္ကန့်လမ်းပထမဦးဆုံးအခြေခံကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ကွဲပြားမှုသိသိသာသာကြိုတင်နောက်ဆက်တွဲသိမြင်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်နှိုင်းယှဉ်ဖို့အသက်အရွယ်အုပ်စုများအကြားကွာခြားမ signal ကို activation အတည်ပြုပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားချဉ်းကပ်အလားတူအခြေခံ activation ပုံစံများကိုပြသသူကိုသာလူငယ်များနှင့်လူကြီးများကိုနှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်ဆင်တူပါလိမ့်မယ် post ကို hoc စွမ်းဆောင်ရည်-ကိုက်ညီခြင်း Schlaggar et al (အပြုအမူဒေတာအတွက်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ , 2002).
အရှင်ဝေးတင်ပြအလုပ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုတစ်ဦးမြင့်ကာလကြောင်းအကြံပြုသော်လည်း, အားလုံးမဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်ဆုလာဘ်-ရှာဖွေနေသူဖြစ်ကြသည်။ အပြုအမူနှင့်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုဆန်းစစ်၏အရေးပါမှုကိုဥပမာတွမ် et al (အရွယ်ရောက်ပြီးသူနမူနာအတွက်တန်ဖိုးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ , 2007) ဒါပေမယ့်ဒီထက်အလုပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလူဦးရေကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုလာဘ်-ရှာခြင်းနှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေ (ဥပမာ, လောင်းကစားခြင်းနှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု) ထိုသို့သောမြင့်မားသောအသစ်အဆန်းများနှင့်အာရုံခံစားမှု-ရှာကြံအဖြစ်အထူးသဖြင့်အမူအကျင့်စရို, (Willis et al နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်ကြသည်။ , 1994) ။ ဤသုံးသပ်ချက်အားသက်ဆိုင်ရာပု ventral striatum ၏ anticipatory activation, တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအဆင့် (ဂူနှင့် Bern မှာဆုလာဘ်-related အန္တရာယ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်း 2002; Matthews က et al ။ , 2004; Kuhnen နှင့် Knutson, 2005) ။ ဥပမာ, ကြိုတင်တစ်လောင်းကစားဝိုင်းရွေးချယ်မှုဖို့ ventral striatum အတွက် သာ. ကြီးမြတ် activation ကိုပြသတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီဟာအန္တရာယ်ထက်ဘေးကင်းလုံခြုံ, ရွေးချယ်မှု (Kuhnen နှင့် Knutson, အောင်ဖို့ပိုများပါတယ် 2005) ။ ပိုများသောယေဘုယျအားဖြင့်ယခင်လေ့လာမှုများဝါသနာရှင် et al (သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏ထိရောက်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုသပိတ်မှောက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြ။ , 2002), အရာအကြိုးအခြေအနေများတွင် Self-စည်းမျဉ်းများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းကအတွက်ဆန္ဒပြည့်တာဝန်တစ်ခုနှောင့်နှေးနေစဉ်အတွင်းကွာကြိုးလှုံ့ဆော်မှုအနေဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုညွှန်ကြားနိုင်စွမ်း Eigsti et al (အသက်တာ၌နောက်ပိုင်းမှာသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးခန့်မှန်းထားပါတယ်။ , 2006) ။ အတူတကွဤလေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလူဦးရေအတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အဖြစ်ရှုပ်ထွေးသောဦးနှောက်-အပြုအမူစစ်ဆင်ရေးဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့အတွေ့အကြုံ, အပြုအမူနှင့်အာရုံကြော activation အတွက်တစ်ဦးချင်းမတူကွဲပြားတာ၏အရေးပါမှုကို underscore ။ သွပ်ရည်စိမ် et al (ကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုမှာ။ , 2007), အချို့သောတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဆု - မောင်းနှင်အပြုအမူများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစွဲအဖြစ်အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များမှတိုးမြှင့်အားနည်းချက်အခြေခံသောရှုပ်ထွေး disentangle ကိုကူညီတစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချဉ်းကပ်မှုသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်စွန့်စားရမှုနှင့်စွန့်စားရမှုဆိုင်ရာစရိုက်လက္ခဏာများနှင့်ကြီးမားသောငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်တစ်ခုမျှော်လင့်ခြင်းဖြင့်ဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာတိုက်နယ်ရှိလှုပ်ရှားမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဆန်းစစ်ရန်ဖြစ်သည်။ အသက် ၇ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်အတွင်းရှိတစ် ဦး ချင်းစီတွင် fMRI စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများ၊ အန risk တရာယ်ကျရောက်မှုနှင့်စိတ်မ ၀ င်စားမှုများကိုအမည်မသိကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိသည်။ အဓိကတွေ့ရှိချက်မှာ NAcc လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဖြတ်ပြီးအန္တရာယ်များသောအပြုအမူများလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့အကြားအပြုသဘောဆောင်သောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာလက်တွေ့ဘ ၀ တွင်အန္တရာယ်များသောအပြုအမူများပိုမိုဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကိုဖော်ပြရန်တစ် ဦး ချင်းစီသည်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ventral striatum ကိုအများဆုံးစုဆောင်းခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် dopamine ကြွယ်ဝသောဒေသများတွင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပြောင်းအလဲများကြောင့်စွန့်စားနိုင်သောအပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်ရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ချေရှိနိုင်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများဆုလာဘ် sensitivity ကိုအတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှု၏အခန်းကဏ္ateကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကောင်းတစ် ဦး အစမှတ်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်အနာဂတ်အလုပ်သည်လိင်၊ အသက်၊ အပျိုဖော်ဝင်အဆင့်နှင့်လူမျိုးရေးကွဲပြားမှုများပါ ၀ င်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
က manipulate ဖို့လွယ်ကူပါတယ်ဆုလာဘ်သည်အတိုင်း, အကျိုးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုပိုက်ဆံအထက်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုအများစု, dopamine ကြွယ်ဝ circuitry ၏ကြံ့ခိုင်စုဆောင်းမှု elicits နှင့်ဆုလာဘ်များအရွယ်ရောက်ပြီးသူမော်ဒယ်များအတွက်ကျယ်ပြန့်ကိုသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်လူမှုရေး, အသစ်အဆန်းများနှင့်လည်းမြီးကောင်ပေါက်အကျိုးကို system ပေါ်တွင်အသစ်ကအလင်းကိုသွန်းစေခြင်းငှါလှုံ့ဆော်ကြောင်းမူလတန်းအားဖြည့်ဆုလာဘ်၏အားသာချက်ယူကြောင်းထက်ပိုမိုရိုးရှင်းစွာငွေကြေးဆုလာဘ်များနှင့်လေ့လာမှုများအားဖြင့်လှုံ့ဆော်နေကြသည်။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူကြိုးအပြောင်းအလဲများသည်အဘယ်သို့ဒါကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများနှင့်လူကြီးများမှဆွေမျိုး, ထူးခြားအကြိုးယူဆပါသည်ဘာအခြေခံ dopamine သည့်စနစ်နှင့် ပတ်သက်. လယ်ပြင်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ ကလေးတွေအများဆုံးထိုကဲ့သို့သောသကြားအဖြစ်မူလတန်းစစ်ကူကဆုခခြံနေစဉ်, ဥပမာ, ဆယ်ကျော်သက် Csikszentmihalyi et al (ကလေးများနှင့်လူကြီးများထက်သက်တူရွယ်တူ interaction ကပိုပြီးကြိုးရှာပါ။ , 1977) ။ လေ့လာမှုတစ်ခုတိုးလာလူမှုရေးအရနှစ်လိုဖွယ်ပုံရိပ်တွေ၏ passive ကြည့်ရှုရန် ventral striatum ၏စုဆောင်းမှု, ဒါပေမယ့်မပေးမလိုလားအပ်သောရွယ်တူ (Guyer et al ပြသခဲ့သည်။ , 2009) ။ ကြိုးလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်လူမှုရေးအရနှစ်လိုဖွယ်ရွယ်တူချင်းတစ်ဦးသင့်လျော်သောခြယ်လှယ်ခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်လျှင်သိရန်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်, အကယ်စင်စစ်မြီးကောင်ပေါက်အခြားသူများထက်လူမှုရေးအရနှစ်လိုဖွယ်ရွယ်တူကပိုအကြိုးကိုရှာဖွေဒါပေမဲ့ဒီလေ့လာမှုလူမှုရေး interaction ကမှဆယ်ကျော်သက် sensitivity ကိုအတွက် dopamine ကြွယ်ဝ circuitry ဆက်စပ်. အပါဘူး။ ဒီအတိုင်းတော့, ဘာ ကြိုးနှင့်ဆုလာဘ်တင်ဆက်ထားတဲ့အတွက်အခြေအနေတွင်လှုံ့ဆျောမှု, အပြုအမူများနှင့်အခြားအုပ်စုများမှဆွေမျိုးမြီးကောင်ပေါက်အတွက်နောက်ခံဆုလာဘ် circuitry နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်အချက်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ကောင်းစွာ-စရိုက်လက္ခဏာတွေစွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့် (Steinberg မှအထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည် 2004) ။ အရွယ်ရောက်သူသို့မဟုတ်ကလေးများဆွေမျိုး, မြီးကောင်ပေါက်အယ်လ် Maggs et ( "ပျော်စရာ" သို့မဟုတ်ကြိုးအဖြစ်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေခွဲခြားဖို့ပိုများပါတယ်။ , 1995); ဒီအန္တရာယ်အခွင့်အလမ်းမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်မြီးကောင်ပေါက်သူတို့ရဲ့တိုးမြှင့်အန္တရာယ်-ယူပြီးသဘောထားတွေကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါအရာသည်အခြားအသက်အရွယ်အုပ်စုများထက် dopamine စနစ်, ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤသည်ဖြစ်ရပ်ဆန်းဥပမာ Steinberg (တခြားနေရာကျယ်ကျယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီး, 2004; Ernst နှင့် Mueller, 2008; Somerville et al ။ , 2009).
သူတို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအပြုအမူအပြောင်းအလဲများဆက်စပ်ကြောင့်တခြားနေရာမြောက်မြားစွာကြိမ် (လှံ, ပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်အတိုင်းဤသုံးသပ်ချက်ကိုဟော်မုန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်ကျယ်ပြန့်စာပေမပါဝင်ခဲ့ပါ 2000) ။ သို့သော်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စဉ်အတွင်း dopamine စနစ်နှင့်ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုများအကြားရှုပ်ထွေး interaction ကဖွယ်ရှိထုတ်ဖော်ပြောဆိုဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေကိုအထောက်အကူပြု။ အနာဂတ်အလုပ်အတွက်, dopamine ကြွယ်ဝ circuitry ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုများကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကိုမည်သို့အကဲဖြတ်နိုင်သောစမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်းဤရှုပ်ထွေးအသင်းအဖွဲ့သို့အသုံးဝင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးနိုငျသညျ။
ဒါ့အပြင်အိပ်စက်ခြင်းပုံစံများပြောင်းလဲမှုများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအာရုံကြော function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမည်သို့နောက်ထပ်စာမေးပွဲစုံစမ်းရေးတစ်ဦးအသုံးဝင်သောဧရိယာဖြစ်လိမ့်မည်။ mounting သက်သေအထောက်အထား Benca (အိပ်စက်ခြင်းဟာဦးနှောက်ကို function ကိုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့အတွက်အရေးပါကြောင်းအကြံပြု, 2004; Hagenauer et al ။ , 2009) ။ ဒီဝေဖန်မေးခွန်းတစ်ခုကိုမကြာသေးမီကစာမေးပွဲအိပ်စက်ခြင်းပုံစံများအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်ထိခိုက်ဆယ်ကျော်သက်-ပုံမှန်အပြုအမူ (Dahl နှင့် Lewin, ပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုသာမန်အားဖြင့်သို့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောထိုးထွင်းသိမြင်ထောက်ပံ့ 2002; Holmes et al ။ , 2009) ။ Holmes et al ။ (2009) အိပ်စက်ခြင်း၏ဆင်းရဲသားကိုအိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးနှင့်နည်းပါးလာမိနစ်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ် (Holmes et al စဉ်အတွင်းတုံး striatal လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းပြသ။ , 2009) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြတ်ပြီးဆုလာဘ်-related အာရုံကြော sensitivity ကိုအပေါ် Contextual သက်ရောက်မှုစဉ်းစား၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
အမျိုးမျိုးသောအစီရင်ခံစာများတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ (Andersen က et al အတွက် dopamine စနစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ dimorphism မှတ်ချက်ချကြ။ , 1997) နှင့်အခြေခံအဆောက်အဦး MRI အလုပ် (Giedd et al ။ , 2004) ။ သို့သျောလညျး, သုတေသန၏ဤဧရိယာဖြစ်နိုင်ကြောင့်ဤလေ့လာမှုများအတွက်အတော်လေးကန့်သတ်နမူနာအရွယ်အစားအားဖြင့်ချမှတ်ထားလက်တွေ့ကျတဲ့သတ်များ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI လေ့လာမှုများ, လေ့လာအောက်မှာ-အတော်လေးဖြစ်ခဲ့သည်။ (pause et al functioning ထစ်အငေါ့ dopamine နှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအများအပြားစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းစတင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ထင်ရှားတဲ့လိင်ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်အတိုင်းဤအကျိုးသက်ရောက်မှုလေ့လာမှု၏အရေးပါသောဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ , 2008).
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအောက်ပါမေးခွန်းကိုနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီး: အ dopamine စနစ်က hypo- သို့မဟုတ် Hyper-တုံ့ပြန်မှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်မှဖြစ်သနည်း ဤသုံးသပ်ချက်ကိုမှာဖော်ပြထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအကျိုးကိုစနစ်ကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းအကြီးအကျယ်အပြောင်းအလဲများခြင်းကိုသည်းခံကြောင်းခြောသက်သေအထောက်အထားသည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ထဲမှာ, dopamine စနစ်က Hyper-တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ် Over-စေ့စပ်သောအယူအဆအဘို့ခိုင်ခံ့ထောက်ခံမှုပြသ။ နေစဉ်ကနဦး neuroimaging အလုပ် (Bjork et al ။ , 2004) hypo-တုံ့ပြန်မှုဆုလာဘ်စနစ်ကအယူအဆများအတွက်ထောက်ခံမှုပေးသလိုပဲ, မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများကတည်းကအစားမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းတစ် overactive ဆုလာဘ် system အတွက်ထောက်ခံမှုပေး data ကိုလြှော့ပါပြီ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ထိုလယ်သည်ဤအဆုံးစွန်သောကောက်ချက် (Casey et al အပေါ်ဆုံခံရဖို့ပုံရသည်။ , 2008; Steinberg, 2008; Ernst et al ။ , 2009; Somerville et al ။ , 2009) ။ သို့သော်စမ်းသပ်ကိုင်တွယ်, အနက်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွင်မသိမသာကှဲပွားဤလူမြိုးအပေါ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အဖြစ်အကောင်းဆုံး Geier et al နေဖြင့်မကြာသေးမီအလုပ်အတွက်ရုပ်ပြ။ (2009), ဆုလာဘ်၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်တစ်ဦးဆုလာဘ်-ခန့်မှန်း cue ၏ကနဦးတင်ဆက်မှုလာမည့်ဆုလာဘ်များမျှော်လင့်အဖြစ်အလားတူ hyperactivity ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမပါဘူးထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ကွဲပြားအာရုံကြော sensitivity ကိုအားဖြင့် paralleled နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အတွက်, လူ့မြီးကောင်ပေါက်မြင့်မားတဲ့ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်အတွက် dopamine ကြွယ်ဝ NACC အတွက်ကလေးများနှင့်လူကြီးများမှဆွေမျိုး, တိုးချဲ့ဖွင့်သုံးပြသပေမယ့်ပြသခဲ့သည် လျော့ အနိမ့်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်၌ဤတူညီသောဒေသတွင်း၌ activation (သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006) ။ ထို့ကြောင့်, ဘာ ဆုလာဘ်များနှင့်စွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေနှင့်, ယူဆရ, နောက်ဆက်တွဲအပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ circuitry သြဇာလွှမ်းမိုးပါလိမ့်မယ်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးမှအကြိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုအကြွင်းမဲ့အာဏာမဟုတ်ပါဘူးနှင့်ဆုလာဘ်အစားအခြားရရှိနိုင်ဆုလာဘ်များ၏အခြေအနေတွင်တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်ကဤပြောင်းလဲနေတဲ့အခင်းအကျင်းမှအထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံဖြစ်နိုင်သည်။
ပေါင်းလဒ်မှာဆုလာဘ်စနစ်အ t ကို, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းသိသိသာသာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများခြင်းကိုသည်းခံမရှိသံသယရှိစဉ်အခါဤအရင့်ကျက်ဖြစ်ရပ်များကိုသူအတိအကျ features တွေအလွယ်တကူဆုံးဖြတ်ထားလို့မရနိုင်ပါနှင့်တိရစ္ဆာန်နှင့်လူ့စာပေနှစ်ခုလုံးအတွက်ထပ်မံရှာဖွေတူးဖော်ရေး, တောင်းမည်။ တိရိစ္ဆာန်တွေ့ရှိချက်ထဲမှာ dopamine system ပေါ်တွင်သုတေသန rooting အားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ပိုကောင်းတိကျစွာမြီးကောင်ပေါက်မြင့်မားတဲ့ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ predisposes သော striatal dopamine စနစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဘာနားလည်ရန်, လူ့အလုပ်ကနေအချက်အလက်များ၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူကျပ်ကိုစတင်နိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူအတွက်သွပ်ရည်စိမ် Lab မှအဖွဲ့ဝင်များနှစ်ခုအမည်မသိသုံးသပ်ရေးနှင့်အခြေခံပြဿနာများကိုနှင့် ပတ်သက်. Brad Schlaggar နှင့်အတူယခင်ဆွေးနွေးမှုများအားဖြင့်အထောက်အကူဖြစ်စေမှတ်ချက်များအသိအမှတ်ပြုသည်။
Andersen က SL, Dumont NL, Teicher MH (1997) ။ 7-Oh-DPAT အားဖြင့် dopamine ပေါင်းစပ်တားစီးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု။ Naunyn Schmiedebergs Arch ။ Pharmacol ။ 356, 173-181.10.1007 / PL00005038 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Andersen က SL, Gazzara RA (1993) ။ neostriatal dopamine လွှတ်ပေးရေး apomorphine-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲ၏ ontogeny: အလိုအလျောက်လွှတ်ရာသို့အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ဂျေ Neurochem ။ 61, 2247-2255.10.1111 / j.1471-4159.1993.tb07466.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Andersen ကအက်စ် L ကို, Teicher MH (1999) ။ သိသိ adenosine monophosphate (Camp) periadolescence နှင့်ဒေသအနှံ့သိသိသာသာပြောင်းလဲစေပါသည်။ ပိုစတာအာရုံကြောသိပ္ပံအစည်းအဝေး, မိုင်ယာမီကမ်းခြေ, ဖလော်ရီဒါများအတွက် Society ရဲ့အစည်းအဝေးမှာပေးအပ်သည်။
Andersen ကအက်စ် L, Teicher MH (2000) ။ ကြွက်များတွင် periadolescent ကာလအတွင်း prefrontal cortex အတွက် Dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကို။ Synapse 37, 167-169.10.1002 / 1098-2396 (200008) 37:2<167 :: AID-SYN11> 3.0.CO; 2-B က [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Andersen က SL, Thompson ကအေပီ, Krenzel အီး, Teicher MH (2002) ။ gonadal ဟော်မုန်းအတွက် Pubertal အပြောင်းအလဲများကိုဆယ်ကျော်သက် dopamine အဲဒီ receptor overproduction အခြေခံကြပါဘူး။ Psychoneuroendocrinology 27, 683-691.10.1016 / S0306-4530 (01) 00069-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bandettini PA ဆိုပြီး, Ungerleider LG က (2001) ။ အသစ်သောဆက်သွယ်မှု: အာရုံခံဆဲလျကနေ BOLD ရန်။ နတ်။ neuroscience ။ 412, 864-866.10.1038 / nn0901-864 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Benca RM (2004) ။ အိပ်စက်ခြင်းနှင့် arousal ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း: နိဒါန်း VII မှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုရန်။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1021, 260-261.10.1196 / annals.1308.030 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE (1998) ။ hedonic သက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်သင်ယူမှု, ဒါမှမဟုတ်မက်လုံးပေး salience: ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ? ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 28, 309-369.10.1016 / S0165-0173 (98) 00019-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bjork JM, Knutson ခ, Fong သည် GW, Caggiano DM, Bennett က SM, Hommer DW (2004) ။ မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမက်လုံးပေး-ရူးနှမ်းဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: တူညီနှင့်လူငယ်လူကြီးများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ ဂျေ Neursoci ။ 24, 1793-1802 ။ [PubMed]
Blum K. , Braverman အီး, Holder ဂျေ, Lubar ဂျေ, Monastra V. , Miller ကဃ, Lubar ဂျေ, ချန်တီ, လာဃ (2000) ။ ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ: ထကြွလွယ်သောစွဲလမ်းနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူများ၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုများအတွက် biogenetic မော်ဒယ်။ ဂျေ Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါး 2, 1-112 ။ [PubMed]
Blum K. , Cull JG, Braverman ER, လာ DE (1996) ။ ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ။ နံနက်။ သိပ္ပံ။ 84, 132-145 ။
Bolanos, CA, Glatt SJ, ဂျက်ဆင်ဃ (1998) ။ periadolescent ကြွက်များတွင် dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများမှ Subsensitivity: တစ်အပြုအမူနှင့် neurochemical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ dev ။ ဦးနှောက် Res ။ 111, 25-33.10.1016 / S0165-3806 (98) 00116-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Brenhouse HC, Sonntag KC, Andersen က SL (2008) ။ prefrontal cortex projection အာရုံခံအပေါ်ယာယီ D1 dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုတိုးမြှင့်စိတ်ခွန်အားနိုး salience မှဆက်ဆံရေးမျိုး။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 2375-2382.10.1523 / JNEUROSCI.5064-07.2008 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကာဇီ BJ, သွပ်ရည်စိမ်အေ, Hare က TA (2005) ။ သိမြင်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကာလအတွင်းနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအပြောင်းအလဲများ။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ 15, 239-244.10.1016 / j.conb.2005.03.012 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကာဇီ BJ, Getz အက်စ်, သွပ်ရည်စိမ်အေ (2008) ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်။ dev ။ ဗျာ 28, 62-77 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Caviness V. , ကနေဒီဃ, Richelme C. , Rademacher ဂျေ, Filipek P. (1996) ။ လူ့ဦးနှောက်ကိုအသက်အရွယ် 7-11 နှစ်ပေါင်း: သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးထုထည်ကြီးမားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Cereb ။ cortex 6, 726-736.10.1093 / cercor / 6.5.726 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကုန်သည်များ RA, တေလာ JR, Potenza MN (2003) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 160, 1041-1052.10.1176 / appi.ajp.160.6.1041 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Csikszentmihalyi အမ်, Larson R. , Prescott အက်စ် (1977) ။ ဆယ်ကျော်သက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတွေ့အကြုံ၏ဂေဟဗေဒ။ ဂျေလူငယ်မြီးကောင်ပေါက်။ 6, 281-294.10.1007 / BF02138940 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dahl RE (2004) ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: အားနည်းချက်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုတဲ့ကာလ။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1021, 1-22.10.1196 / annals.1308.001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dahl RE, Lewin DS (2002) ။ ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးအိပ်ပျော်ခြင်းစည်းမျဉ်းများနှင့်အမူအကျင့်ဖို့လမ်းကြောင်း။ ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ ကနျြးမာရေး 31, 175-184.10.1016 / S1054-139X (02) 00506-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
DeGraff C. , Zandstra အီး (1999) ။ ကလေးများ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက်ချိုပြင်းထန်မှုနှင့်သာယာသော။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 67, 513-520.10.1016 / S0031-9384 (99) 00090-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Eigsti ထားတဲ့ IM, Zayas V. , Mischel ဒဗလျူ, Shoda Y. , Ayduk O. , Dadlani ကို MB, Davidson MC, လောရင့် Aber ဂျေ, Casey BJ (2006) ။ နှောင်းပိုင်းတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးမှမူကြိုကနေသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးခန့်မှန်း။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ 17, 478-484.10.1111 / j.1467-9280.2006.01732.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ernst အမ်, Mueller SC (2008) ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်: အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging သုတေသနကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ dev Neurobiol 68, 729-743.10.1002 / dneu.20615 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ernst အမ်, နယ်လ်ဆင် EE, Jazbec SP, လူယာ eb, ရဟန်းတော် CS, Leibenluft အီး, တိုနီဘလဲဂျေ, ထင်းရူး DS (2005) ။ လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကျိုးအမြတ်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens ။ Neuroimage 25, 1279-1291.10.1016 / j.neuroimage.2004.12.038 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ernst အမ်, Romeo RD, Andersen က SL (2009) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်အပြုအမူတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Neurobiology: တစ်အာရုံကြောစနစ်များမော်ဒယ်သို့ပြတင်းပေါက်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 93, 199-211.10.1016 / j.pbb.2008.12.013 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Eshel N. , နယ်လ်ဆင် EE, တိုနီဘလဲ RJ, ထင်းရူး DS, Ernst အမ် (2007) ။ လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ရွေးချယ်မှုရွေးချယ်ရေး၏အာရုံကြောအလွှာ: အ ventrolateral prefrontal ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် anterior cingulate cortical ။ Neuropsychologia 45, 1270-1279.10.1016 / j.neuropsychologia.2006.10.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝါသနာရှင်ဂျေ, McCandliss ခ: D, Sommer တီ, Raz အေ, Posner MI (2002) ။ အာရုံစူးစိုက်မှုကွန်ရက်များ၏ထိရောက်မှုနှင့်လွတ်လပ်ရေးစမ်းသပ်။ ဂျေ Cogn ။ neuroscience ။ 14, 340-347.10.1162 / 089892902317361886 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
သွပ်ရည်စိမ်အေ, Hare က TA, Parra အီး, Penn ဂျေ, Voss အိပ်ချ်, ဂလိုဗာဂျီ, Casey BJ (2006) ။ orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 26, 6885-6892.10.1523 / JNEUROSCI.1062-06.2006 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
သွပ်ရည်စိမ်အေ, Hare က TA, Voss အိပ်ချ်, ဂလိုဗာဂျီ, Casey BJ (2007) ။ စွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်: အန္တရာယ်မှာဘယျသူနညျး dev ။ သိပ္ပံ။ 10, 1-7 ။ [PubMed]
Geier CF, Terwilliger R. , Teslovich တီ, Velanova K. , Luna ခ (2009) ။ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်နု။ Cereb ။ cortex [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Giedd ဖြစ်မှု (2004) ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI ။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1021: 77.10.1196 / annals.1308.009 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Giedd ဖြစ်မှု, Blumenthal ဂျေ, Jeffries NO, Castellanos FX, လျူ H ကို, Zijdenbos အေ, pause တီ, အီဗန်, AC, Rapoport JL (1999) ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: တစ် longitudinal MRI လေ့လာမှု။ နတ်။ neuroscience ။ 2, 861-863.10.1038 / 13158 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Giedd ဖြစ်မှု, Snell ဂျေ, Lang N. , Rajapakse ဂျေ, Casey ခ, Kozuch P. , Vaituzis အေ, Vauss Y. , ဟမ်ဘာဂါအက်စ်, Kaysen ဃ, Rapoport JL (1996) ။ လူ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ quantitative သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်: အသက်အရွယ် 4-18 ။ Cereb ။ cortex6551-560.10.1093 / cercor / 6.4.551 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gogtay N. , Giedd ဖြစ်မှု, Lusk L. , Hayashi KM, Greenstein ဃ, Vaituzis AC အ, Nugent TF, III ကို, Herman ဃ H ကို, Clasen LS, Toga AW, Rapoport JL, Thompson ကညနေ (2004) ။ အစောပိုင်းလူကြီးတဆင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းလူ့ cortical ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ dynamic မြေပုံ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 101, 8174-8179.10.1073 / pnas.0402680101 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Guyer AE, လူယာ-Tone ကို eb, Shiffrin ND, ထင်းရူး DS, နယ်လ်ဆင် EE (2009) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်မျှော်မှန်းရွယ်တူအကဲဖြတ်များ၏အာရုံကြောဆက်စပ်စကားတွေ။ ကလေးသူငယ် Dev မှ။ 80, 1000-1015.10.1111 / j.1467-8624.2009.01313.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hagenauer အမ် H ကို, Perryman JI, Lee က TM, Carskadon MA (2009) ။ အိပ်စက်ခြင်း၏ homeostatic နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian စည်းမျဉ်းထဲမှာဆယ်ကျော်သက်အပြောင်းအလဲများကို။ dev ။ neuroscience ။ 31, 276-284.10.1159 / 000216538 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Holmes သည် SM, Forbes မဂ္ဂဇင်း EE, ရိုင်ယန် ND, Phillips က ML, Tarr ဂျာ Rahl RE (2009) ။ ကြိုတင် / အစောပိုင်း pubertal အတွက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက် function ကိုအိပ်ခြင်းနှင့်နှစ်လယ်ပိုင်း / pubertal မြီးကောင်ပေါက်ကိုစားကြ၏။ ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ ကနျြးမာရေး 45, 319-320.10.1016 / j.jadohealth.2009.04.001 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကနေဒီ DN, Haselgrove C. , McInerney အက်စ် (2003) ။ ပုံမှန်နှင့် atypical ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ MRI-based morphometric ။ Ment ။ Dev မှနှောင့်နှေး။ Disabil ။ res ။ ဗျာ 9, 155-160.10.1002 / mrdd.10075 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Knutson ခ, Fong သည် GW, အဒမ် CM, Varner JL, Hommer ဃ (2001) ။ အဖြစ်အပျက်-ဆက်စပ် fMRI နှင့်အတူဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ရလဒ်၏ Dissociation ။ Neuroreport 12, 3683-3687.10.1097 / 00001756-200112040-00016 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf, Swerdlow ရော်ဘာ (1988) ။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်၏အလုပ်လုပ်တဲ့ output ကို။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 537, 216-227.10.1111 / j.1749-6632.1988.tb42108.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kotsoni အီး, Byrd တို့ပါပဲဃ, Casey BJ (2006) ။ ကလေးအထူးကုလူဦးရေ၏အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အထူးထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ဂျေ Magn ။ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု။ imaging 23,877-886.10.1002 / jmri.20578 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kuhnen CM, Knutson ခ (2005) ။ ဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ အာရုံခံဆဲလျ 47, 763-770.10.1016 / j.neuron.2005.08.008 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Larson R. , Asmussen L. (1991) ။ အမျက်ဒေါသ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်အတွက်မကောင်း: အပျက်သဘောဆောင်သောစိတျလှုပျရှားမှု၏ Enlarge ကမ္ဘာ့ဖလား။ နယူးယောက်, NY: Aldine က de Gruyter ။
Laviola G. အ, Macri အက်စ်, Morley-ဖလက်ချာအက်စ်, Adriani ဒဗလျူ (2003) ။ စွန့်စားမှု-ယူပြီးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုကြွက်များတွင်အပြုအမူ: psychobiological ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အစောပိုင်းဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 27, 19-31.10.1016 / S0149-7634 (03) 00006-X ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Laviola G. အ, Pascucci တီ, Pieretti အက်စ် (2001) ။ Striatal dopamine periadolescent D-စိတ်ကြွဆေးဖို့လွယ်ပေမယ့်မရအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များဖြစ်သည်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 68, 115-124.10.1016 / S0091-3057 (00) 00430-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Logothetis N. ပေါလုသည်ဂျေ, Augath အမ်, Trinath တီ, Oeltermann အေ (2001) ။ အဆိုပါ fMRI signal ကို၏အခြေခံ၏ Neurophysiological စုံစမ်းစစ်ဆေး။ သဘာဝတရား 412,150-157.10.1038 / 35084005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Maggs ဂျေ L ကို, Almeida ဃ M က, Galambos NL (1995) ။ အန္တရာယ်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်း: ငယ်ရွယ်မြီးကောင်ပေါက်အဘို့ပြဿနာအပြုအမူ၏ဝိရောဓိအဓိပ္ပာယ်ကို။ ဂျေအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်။ 15, 344-362.10.1177 / 0272431695015003004 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Matthews က SC, Simmons AN, ယာဉ်ကြော SD, Paulus အမတ် (2004) ။ အန္တရာယ်-ယူပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens ၏ရွေးချယ် activation ။ Neuroreport 15, 2123-2127.10.1097 / 00001756-200409150-00025 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မေလ JC, Delgado MR, Dahl RE, Stenger VA သို့, ရိုင်ယန် ND, Fiez ဂျာ Carter က CS (2004) ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက် circuitry ၏အဖြစ်အပျက်-related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 55, 359-366.10.1016 / j.biopsych.2003.11.008 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂူ DM, Lawler က CP, စာပို့သမား RB, Gilmore JH (1999) ။ လူ့ caudate နှင့် putamen အတွက် dopamine D1 အဲဒီ receptor ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း။ Neuropsychopharmacology 21, 641-649.10.1016 / S0893-133X (99) 00062-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂူ PR စနစ်, Bern GS (2002) ။ အာရုံကြောဘောဂဗေဒနှင့်အဘိုးပြတ်၏ဇီဝအလွှာဟာ။ အာရုံခံဆဲလျ 36, 265-284.10.1016 / S0896-6273 (02) 00974-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂူ PR စနစ်, Hyman SE, Cohen ကို JD (2004) ။ အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် dopamine ဘို့တွက်ချက်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝတရား 431,379-387.10.1038 / nature03015 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Palacios JM, စခန်းများမှအမ်, Corte R. , Probst အေ (1988) ။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine receptors ပုံဖော်။ ဂျေဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော။ Transm ။ ပျော့ပျောင်း။ 27, 227-235 ။ [PubMed]
Panksepp ဂျေ (1998) ။ အကျိုးသက်ရောက်စေအာရုံကြောသိပ္ပံ။ နယူးယောက်, အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်နှိပ်ပါ။
pause တီ, Keshavan M က, Giedd ဖြစ်မှု (2008) ။ အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောစိတ်ရောဂါမမှန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပေါ်ထွက်လာသလဲ? နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 9, 947-957 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Rutter အမ်, ဂရေဟမ် P. , Chadwick O. , Yule ဒဗလျူ (1976) ။ ဆယ်ကျော်သက်မငြိမ်မသက်: တကယ်တော့သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်? ဂျေကလေး Psychol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 17, 35-56.10.1111 / j.1469-7610.1976.tb00372.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schlaggar BL, Brown က TT, သည်များ HM, Visscher KM, Miezin FM ရေ, Petersen SE (2002) ။ တစ်ခုတည်းသောစကားများအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်လူကြီးများနှင့်ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများအကြား functional neuroanatomical ကွဲပြားခြားနားမှု။ သိပ္ပံ 296, 1476-1479.10.1126 / science.1069464 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Seeman P. , Bzowej နယူးဟမ်းရှား, ဂွမ် H.-C. , Bergeron C. , Becker က LE, Reynolds ကမိသားစုဆရာဝန်, Bird ကို ED, Riederer P. , Jellinger ကေ, က Watanabe အက်စ်, Tourtellotte WW (1987) ။ ကလေးများနှင့်အိုမင်းလူကြီးများအတွက်လူ့ဦးနှောက် dopamine receptors ။ synapses 1, 399-404.10.1002 / syn.890010503 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Shaw P. , Kabani NJ, Lerch JP, Eckstrand K. , Lenroot R. , Gogtay N. , Greenstein ဃ, Clasen L. , အီဗန်အေ, Rapoport JL, Giedd ဖြစ်မှု, ပညာရှိ SP (2008) ။ လူ့ဦးနှောက် cortex ၏ Neurodevelopmental ဘယ်နေရာတွေမှာလဲ။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 3586-3594.10.1523 / JNEUROSCI.5309-07.2008 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Somerville LH, ဂျုံးစ် RM, Casey BJ (2009) ။ ပြောင်းလဲမှု၏တစ်ဦးကအချိန်: အစာစားချင်စိတ်မှဆယ်ကျော်သက် sensitivity ကို၏အပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဆက်စပ်နှင့်ဆန္ဒရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကို။ ဦးနှောက် Cogn ။ [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Sowell ER, Peterson BS, Thompson ကလေး, SE, Henkenius AL, Toga AW (2003) မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ လူ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် cortical ပြောင်းလဲမှုပုံဖော်။ နတ်။ neuroscience ။ 6, 309-315.10.1038 / nn1008 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sowell ER, Thompson ကလေး, ကေတီဟုမ်း CJ, Jernigan TL, Toga AW (1999) ။ တိုကျရိုကျနှင့် striatal ဒေသများတွင် Post-ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ရငျ့အဘို့အ Vivo သက်သေအထောက်အထားအတွက်။ နတ်။ neuroscience ။ 2, 859-861.10.1038 / 13154 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လှံကို LP (2000) ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 24, 417-463.10.1016 / S0149-7634 (00) 00014-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Stamford ဂျေအေ (1989) ။ အစာရှောင်ခြင်းသိသိ voltammetry နှင့်အတူလေ့လာကြွက် nigrostriatal dopamine စနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အိုမင်း။ ဂျေ Neurochem ။ 52, 1582-1589.10.1111 / j.1471-4159.1989.tb09212.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Steinberg L. (2004) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ယူပြီးအန္တရာယ်: အဘယျသို့အပြောင်းအလဲ, ဘာကွောငျ့လဲ? အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1021, 51-58.10.1196 / annals.1308.005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Steinberg L. (2005) ။ ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပေါ်တစ်ဦးကလူမှုရေးမှ neuroscience ရှုထောင့်။ dev ။ ဗျာ 28, 78-106.10.1016 / j.dr.2007.08.002 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Steinberg L. (2008) ။ ဆယ်ကျော်သက် risk- ဆည်းပူးနေအပေါ်တစ်ဦးကလူမှုရေးမှ neuroscience ရှုထောင့်။ dev ။ ဗြာ 28, 78-106.10.1016 / j.dr.2007.08.002 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tarazi FI, Tomasini EC, Baldessarini RJ (1998) ။ ကြွက် forebrain ဒေသများတွင် dopamine D4 ကဲ့သို့ receptors ၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုး: D2 ကဲ့သို့ receptors နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ dev ။ ဦးနှောက် Res ။ 110, 227-233.10.1016 / S0165-3806 (98) 00111-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tarazi FI, Tomasini EC, Baldessarini RJ (1999) ။ ကြွက် cortical နှင့် striatolimbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင် dopamine D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ Postnatal ဖှံ့ဖွိုးတိုး: တစ်ခု autoradiographic လေ့လာမှု။ dev ။ neuroscience ။ 21, 43-49.10.1159 / 000017365 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Teicher MH, Andersen က SL, Hostetter JC ဂျူနီယာ (1995) ။ striatum အတွက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးအကြား dopamine အဲဒီ receptor တံစဉ်များကိုအဘို့သက်သေအထောက်အထားသော်လည်းမနျူကလိယ accumbens ။ dev ။ ဦးနှောက် Res ။ 89, 167-172.10.1016 / 0165-3806 (95) 00109-Q [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Teicher MH, ဘာဘာ ni, Gelbard HA, Gallitano AL, ကမ့်ဘဲလ်တစ်ဦးက, နားမှာအီး, Baldessarini RJ (1993) ။ စူးရှသော nigrostriatal နှင့် haloperidol မှ mesocorticolimbic စနစ်ကတုံ့ပြန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု။ Neuropsychopharmacology 9, 147-156 ။ [PubMed]
Thomason ME, Burrow, Gabrieli JDE, ဂလိုဗာ GH (2005) BE ။ အသက်ရှုကျင်းပနိုင်ရန်ကလေးငယ်များအတွက် fMRI BOLD signal ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးဖော်ပြသည်။ Neuroimage 25, 824-837.10.1016 / j.neuroimage.2004.12.026 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
တွမ်သည် SM, Fox က CR, Trepel C. , Poldrack RA (2007) ။ စွန့်စားမှုအောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ဆုံးရှုံးမှုခြင်းကိုမနှစ်သက်များ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ သိပ္ပံ 315, 515-518.10.1126 / science.1134239 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဗန်က de Moortele PF, Pfeuffer ဂျေ, ဂလိုဗာ GH, Ugurbil K. , Hu X တို့မှာ (2002) ။ အသက်ရူအကာ-သွေးဆောင် B0 အတက်အကျနှင့်7တက်စလာမှာလူ့ဦးနှောက်မှာသူတို့ရဲ့ Spatial ဖြန့်ဖြူး။ Magn ။ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု။ Med ။ 47, 888-895.10.1002 / mrm.10145 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဗန် Leijenhorst L. , Zanolie K. , ဗန် Meel CS, Westenberg P. M က, Rombouts အက်စ်တစ်ဦးက, Crone EA ၏ (2009) ။ အဘယ်အရာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလှုံ့ဆျော? မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးဆုလာဘ် sensitivity ကိုဖြန်ဖြေဦးနှောက်ဒေသများ။ Cereb ။ cortex [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] ။ [PubMed]
Watson ဃ, Clark ကအယ်လ် (1984) ။ အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်: ဆန္ဒရှိစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့သဘော။ Psychol ။ နွားလား။ 96, 465-490.10.1037 / 0033-2909.96.3.465 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Willis က TA, Vacarro,, McNamara G. အ (1994) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသူအဖြစ်အသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်း၊ စွန့်စားရမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ - Cloniger ၏သီအိုရီကိုအသုံးပြုသည်။ ဂျေ Subst ။ အလွဲသုံးစားမှု 6, 1-20.10.1016 / S0899-3289 (94) 90039-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]